Isikhathi esining impela emzimbeni yabesifazane egcina ukuphazamiseka kwama-hormone, ngokumelene okungase kuvele zezifo ezahlukene. Ekukhulelweni sihamba sokulungiswa i umzimba, lapho ezahlukene kungenzeka egunjini lokuhlolwa kwezifo. Ukuze Yiqiniso ejwayelekile izidingo zayo endometrium enempilo, kuyilapho ukungalingani hormone ekhula Ukuboshelwa. Yingakho abesifazane ukuthuthukisa polyp ngesikhathi sokukhulelwa. Ingabe kuyingozi ukuba isimo esinjalo umntwana, futhi indlela yokuphatha kulo, kuchaziwe ngezansi.
Umthelela izifo sokukhulelwa
Kungcono uma umama okhulelwe kusengaphambili ngempilo yabo, le ndlela yokwelapha ngesikhathi sokukhulelwa akusho ukulimaza umbungu. Noma yimuphi polyp kufanele kususwe ngaphambi nje ebamba isisu, ngoba lokhu odokotela kufanele usebenzise izinto zokubulala izinzwa. Isikhathi esining impela, isifo kuvimbela ukukhulelwa (aluphumeleli iqanda eselivundisiwe) Nokho, ukuthi kwenza abantu bakuphathe a conception ukubukeka kwakhe.
Ngokuvamile i-polyp ngesikhathi sokukhulelwa akusho ukulimaza kukamama noma kwengane. Uma ingane iyakwazi unamathisele ngokwayo odongeni lesizalo, le polyp akuyona wathinta kuze umntwana wakhe esezelwe. Kwezinye izimo eziyinkimbinkimbi kudingeka ukususwa okusheshayo izimila. Ngu asesebenzisa izinyathelo ezinjalo kuphela uma usongela ukuphila umbungu. Uma zokugula kutholakele futhi isuswe ngaphambi kokukhulelwa, kufanele namanje ahlolwe futhi, ngoba kungenzeka kabusha ukuvela.
Ngingathola abakhulelwe uma polyp
Njengoba kushiwo ngenhla, ama-polyp ukugxambukela ukukhulelwa, kodwa kukhona izimo, lapho nje ebamba isisu kwenzeka futhi uma lokhu ngoba uyayazi imbangela. Okuningi kuxhomeke ekutheni indawo nokukhula yabo izici. Ngokwesibonelo, ezikhulayo kancane encane polyp wesibeletho ngesikhathi sokukhulelwa ayinayo imiphumela engemihle. Nokho, abesifazane kudingeka yokwelapha osekelayo, eqinisweni ngenxa kungaba ukungena ukutheleleka umbungu.
Uma isimila elincane uvele esibelethweni, iqanda eselivundisiwe usengadlulisela indawo oyifunayo bese unamathisela. Nokho, musa adalule lokhu ingozi empilweni ingane esizayo. Kungenzeka ukuthi lesi sifo bachubeka nokuvuselela ukubeletha singakafiki isikhathi noma ukuyeka ukuthuthukiswa ombungu. Kuyaphawuleka ukuthi owesifazane ungathola abakhulelwe nge polyp, kodwa izibikezelo odokotela ngokuvamile ezingezinhle kakhulu.
Ngokuvamile, ama-polyp esibelethweni, izimpawu kanye nokwelashwa elichazwa ngezansi, musa ubonise ngokwabo, futhi akavumi ukuba noma yimuphi kabi. Ngokuvamile bathola udokotela noma abazi ukuza emva yisihlungu noma awe ukulimala. Kungase kube nezimpawu ezifana:
- iziyaluyalu kokuya esikhathini;
- nobunzima ekubeni okhulelweyo;
- zokubona kanye nokuhlukumezeka emva kocansi nobe luhlolo izifo zabesifazane;
- imfiva kanye umkhuhlane;
- zichithe nge nephunga ezingemnandi;
- cramping noma edonsa iqolo noma ephansi esiswini;
- ukuvuvukala ukhalo (ngenxa yokulimala kanye ukutheleleka).
Kaningi, odokotela Ungabona polyp ku wesibeletho ngesikhathi sokukhulelwa e inqubo ukuhlolwa owesifazane esitulwini. Ngokuhamba kwesikhathi, kungase kuvele ukuguguleka komhlabathi, amakhefu nezinye izinguquko edabukisayo. Ubukhulu izimila ezincane (ipea obujwayelekile) noma mikhulu (ukufinyelela ufa ngokobulili).
Njengoba kushiwo ngenhla, imbangela eyinhloko lesi sifo - ngemuva kwama-hormone. Nokho, kungase kube nezinye izizathu:
- ezingamahlalakhona ukutheleleka okhalo futhi ngomgudu womchamo;
- imali ngokweqile estrogen noma ukungabi progesterone;
- nomfutho wegazi ophezulu;
- Ngokushesha Conception emva ukususwa polyp;
- kuphula umthetho we izinqubo umzimba emzimbeni futhi khona isisindo okweqile;
- izifo ezibangelwa amagciwane;
- isimo abampofu endometrium, elihlobene ne ihlukane ngokwengxenye umzanyana ngesikhathi sokubeletha noma isisu.
ukusetshenziswa kakhulu eside idivayisi intrauterine (ngezinye izikhathi likhula) kungaholela yokuthi polyp akhiqizwa kwesibeletho. Ngo sokukhulelwa, bayoba azibonakali futhi, mhlawumbe, luyokhula ngokushesha.
Imfundo enjalo njengoba lesizalo polyp ngesikhathi sokukhulelwa, kubhekwa kungavamile ukuba ingozi, okungukuthi awusebenzi umdlavuza. Nokho, ukunwetshwa nemiphumela yayo ezinkulu, njengalezo nenzalo. Umbungu ngeke ungene kwesibeletho futhi babiza nodonga lwawo, izingalo ngenxa izinga ehlupheka neoplasms we endometrium. Uma ukukhulelwa namanje iphutha, khona-ke cishe, ke kuzophela yisisu.
Lesizalo polyp ngokuvamile yayincane, okuyinto uyahluka a kwangu ambalwa, sentimitha. Ngakho-ke, musa ngokuvamile ukwesabisa amandla okuzala ka abesifazane. Eziyingozi kukhona zokwakheka ezinkulu.
Polyp e umsele wesibeletho
Uma polyp kayikhuli, akuyona Ushintshe, akusiyo yingozi. eziyingozi yisihlungu kuhlotshaniswa ukulimala noma necrosis (kwegazi). Lokhu kubonakaliswa kuyoboniswa nguMbusi engozini ukunothisa, ngakho badinga ukwelashwa, ukunciphisa ukuvuvukala. polyp wesibeletho ngesikhathi sokukhulelwa singasuki kinid, ngakho ukusebenza wenziwa emva kokubeletha.
a neoplasm enjalo etholakala umsele wesibeletho (phakathi emomozini bese isibeletho). Khumbula ukuthi ngaphandle kokwelashwa, kungase ukuthola ifomu ebulalayo. Odokotela ilapha lezo zifo ngokuhambisana isimo wesibeletho, okuyinto kakhulu sensitive noma yiziphi izinguquko (kwesisu ngakho kwabangela). Futhi banake izikhalazo we abakhulelwe: osenyameni engavamile, ubuhlungu futhi amajaqamba, imfiva, njll ...
Lesi sifo kungaba nzima ukopha (ngokuvamile bathambekele yakha e umsele wesibeletho). Yini owesifazane, uma polyp ngesikhathi sokukhulelwa igazi? Igazi ikhishwe ngesikhathi ngocansi, luhlolo izifo zabesifazane. In the ukungabikho imiphumela mechanical kungaba adedelwe kuphela uma zokwakheka ezinkulu.
Wesibeletho polyp usayizi esikhulu kungabangela ukubukeka zokubona malodorous. Abakwazi zinyamalale futhi avele futhi, elimazayo. Uma abesifazane nezimpawu ezifana, kubalulekile: ukubona onguchwepheshe, wanciphisa ukuhileleka ngokomzimba, ayeke umsebenzi wocansi, inhlanzeko njalo. Ngisho ne ukopha neoplasm uyakwazi azalwe ingane enempilo futhi eqinile.
Ngo-polyp kakhulu isuswe ngu hysteroscopy, curettage noma ukwelashwa kwama-hormone. Hysteroscopy kwenziwa kudivayisi ekhethekile ngesimo ngamapayipi ifakwe ngekhamera futhi amathuluzi. It is injected kwesibeletho ngokusebenzisa ipheshana zangasese futhi ususe yesimila. Nokususa - indlela akusebenzi futhi kuyingozi ukuhlinzwa njengoba udokotela wenza zokukhwabanisa zifa. yokwelapha hormone kuphumelele futhi kungaholela ukuthi imfundo iyoba anomdlavuza.
owesifazane okhulelwe Awukwazi ukwenza curettage futhi zibeka hormone, uma efuna ukugcina ingane. Treatment luhlehliswe kwesikhathi emva kokubeletha, kodwa ukubonakala nezinhlungu ezinzima kanti odokotela ukopha ukuphakamisa ukuhlinzwa eziphuthumayo nge isisu yokuhlinza noma wezokwelapha.
Kungaba ngcono uma polyp isuswe ngesikhathi sokukhulelwa kusaqalwa. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukuhlinzwa okunjalo - isilinganiso kakhulu. Kulokhu, lesi sidakamizwa uyozuza ukwesekwa okuthe xaxa ebhekiwe odokotela.
Ngesikhathi ekhulelwe emva kokuhlinzwa
Abesifazane abakhulelwe akudingekile ukususa isimila, kodwa ukuhlinzwa kungadingeka nge ukubonakala izimpawu zokukhathazeka. Uma isimila waphupha zisuswe, impilo kowesifazane okhulelwe bese sizoba esibhedlela. Lapho isimo sizinzile, owesifazane ngeke angakhishwa. Esikhathini esizayo, cishe, kuyodingeka uthathele imithi ukuze ingafaki lokubuya kwesifo nabongci ukopha.
Esikhathini ukulawula isifo kubalulekile ukunakekela impilo yabo, ngoba kuthinta impilo ingane esizayo. Lapho nje izinsolo polyp esibelethweni (izimpawu kanye nokwelashwa kwaxoxwa ngenhla), kubalulekile ukubona onguchwepheshe isikhathi esifushane. Kasibili akunandaba, kuqala wabonakaliswa isifo noma isimo saba sibi kakhulu ngemva kokuzibeka elangeni kuhlinzwa. Into ebaluleke kakhulu ukukhumbula ukuthi ngisho ukuthi unesimila ingozi kungaholela ekulahlekelweni ingane noma ukuhlukumeza sokuthuthuka.
Yini kufanele kube izinga lokushisa rectal phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Ukunquma uma ethunjini sokukhulelwa hCG kusiza test
Ukukhulelwa eneminyaka engu-38: umbono odokotela mayelana nezingozi
Toxemia yokukhulelwa: ukuqala ukukhathazeka lapho?
24 Emaviki abakhulelwe: izici eziyinhloko kwesikhathi
Cream La Roche-Posay: izithombe, ukubuyekezwa kanye analogue
Yini ikhondomu nge amadevu futhi kungani sasidingeka?
Yini okufanele ibe voltage ibhethri imoto?
Dmitry Vetchinnikov: indlela ingane enamahloni ukuba bahlale bamukelwa yonke indawo